Global Aawaj | हसिलो स्वभावका रुजेश हसिलो स्वभावका रुजेश
हसिलो स्वभावका रुजेश
रुजेश शाहीको जन्म वि.सं. २०३४ सालमा काठमाडौं- २० कोहिटीमा भएको थियो । उनका पिता ज्ञानरत्न शाही पनि पावर लिफ्ट्रर थिए । जसले २०३८ सालमा भएको प्रथम राष्ट्रिय भारत्तोलन प्रतियोगितामा रजत पदक जितेका थिए । परिवारीक माहोल नै व्यायाममैत्री भएकाले रुजेशले दाजु रुपेशसँग मिलेर पिताले तालिम लिन जोहो गरेका व्यायाम सामानले १४ वर्षको कलिलो उमेरमै व्यायाम शुरुवात गरे ।
पछि उनी फिटनेस स्टुडियो तिर व्यायाम गर्न थाले । उनको पहिलो प्रतियोगिता आफू ३८ बर्षको हुँदा खेलेका थिए । त्यो प्रतियोगिता २०७१ सालमा नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेश संघद्वारा आयोजना भएको पाँचौं मिष्टर हिमालय थियो । जसमा उनी सहभागी भई ६० केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भए । सोही वर्ष नेपाल व्यायाम मन्दिरबाट आयोजना भएको तेह्रौ धर्मश्री शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा उनी ५५ केजीमा तौल समुहमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल भए । वि.सं. २०७१ सालमा सम्पन्न भएको प्रथम बुल्समेन शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा ६० केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दै कास्य पदक प्राप्त गरे ।
वि.सं. २०७२ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न १५ औं राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा ६० केजी तौल समूहमा उनी प्रथम हँुदै मिष्टर नेपालको उपाधि जित्न सफल भए । रुजेशले आफ्नो जिम प्रशिक्षकका रुपमा शारीरिक सुगठनका चर्चित खेलाडी अर्जुन वर्णवाललाई मान्छन् । रुजेशले स्वदेशमा मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा विदेशमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका थिए । सन् २०१४ मा भारतको मुम्बईमा आयोजना भएको WBPF 6th World Bodybuilding and Physics Sports Championship मा सहभागिता भई छैटौं स्थान प्राप्त गर्न सफल भए ।
सन् २०१५ मा थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना भएको 7th World Bodybuilding and Physics Sports Championship मा सहभागी भई ५५ केजी तौल समूहमा रजत पदक प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । सन् २०१७ मा मंगोलियामा आयोजित नवौं संस्करणको सोही प्रतियोगितामा ६० केजी तौल समूहमा कास्य पदक हासिल गर्ने सफल भएको उनी बताउँछन् । प्रतियोगिता खेल्न थालेको सानो समयमै विश्व शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा रजत पदक हात पारेको क्षणलाइ जीवनको सबैभन्दा सुखद पलका रुपमा संझन्छन् । खेलयात्राको क्रममा नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघका उपाध्यक्ष दिनेश राजभण्डारीलाई उनी आदर्शका रुपमा मान्छन् । उनले देखाएको गोरेटो पछ्याएर नै आफुले सफलता हात पारेको उनी सुनाउछन् ।
रुजेश वि.सं. २०७१ सालदेखि हालसम्म डिभाइन फिजिकल फिटनेशमा व्यायाम प्रशिक्षकका रुपमा क्रियाशील रहेको छन् । काठमाडौं जिल्ला शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघका कोषाध्यक्ष समेत रहेका रुजेशकाबारे चर्चा गर्दै जिल्ला अध्यक्ष सुरेश सुवेदी भन्छन्, ‘हसिलो स्वभावका रुजेश सारै मेहनती खेलाडी हुन् । हामीले मिष्टर काठमाडौं प्रतियोगिताको थालनी गर्नुमा पनि उनको सल्लाहको महत्वपूर्ण हात छ ।’ थोरै समयमा नै उनले शारीरिक सुगठन खेलमा हासिल गरेको उचाईको उच्च मुल्यांकन गर्दै डिभाइन फिजिकल फिटनेश र नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटने संघद्वारा उनलाई कदर पत्रले सम्मान गरिसकेको छ ।